Hetsi-panoherana Faobe Tao Iràna, Fanadihadiana Ny Amin’ny Fototra Nipoirany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2018 16:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Italiano, Español, Ελληνικά, 繁體中文, English
Vahoaka Iranianina, nivory sy nanao hetsika teo an-tokontany malalak'i Ferdowsi tao Téhéran tamin'ny Sabotsy hariva, no niparitaka raha nametraka fiara be mpitifitra rano ny mpitandro ny filaminana. Sary nalaina tao amin'ny gazety Iranianina , nozaraina mba hiparitaka.
Tsy misy ahiahy intsony ankehitriny: misy zavatra miotrika ao Iràna. Tamin'ny faha 28 desambra 2017, nisy hetsika nitranga tao Machhad nohon'ny ‘halafon'ny vidim-piainana’ ary nihitatra hatrany amin'ny tanàna madinika sy tanàndehibe izany ny ampitson'io andro io. Nihanitombo ny fanazavana azo mikasika ny mety antony nahatonga ilay toe-javatra miseho ankehitriny, ary vetivety kely dia navoaka ireo vinavinan-kevitra sy fanazavana maro.
Mampiroaroa saina ahy ireo olona manana valiny betsaka kokoa noho ny fanontaniana momba ny hetsika ao Iràna.
Mila mitongilana kely mankany amin'ny tantaran'i Iràna taloha isika mba hahafahana mahafantatra tsara ny toe-javatra miseho amin'izao fotoana izao, ary mijery tsirairay avy ireo antony rehetra tena mahatonga irey trangan-javatra ireny. Fanehoana kely ny zava-mitranga eny an-toerana, inona moa izany no mahasamihafa azy io amin'ny hetsi-panoherana tamin'ny taona 2009, ary nahoana no mieritreritra ny olona sasany fa manan-danja kokoa noho ny nieritreretana azy ny ady atrehana amin'ity?
Ireo hetsika ireo no voalohany natanjaka indrindra taorian'ny hetsi-panoherana nateraky ny tsy fankasitrahana ny nahalany indray ny Filoham-pirenena Mahmoud Ahmadinejad tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2009. Toy ny tamin'ny hetsika tamin'ny taona 2009, dia nisy ny fanetsehana ny firenena manontolo nanoherana ny ‘omaly tsy miova’ ; fa fotsiny, ny tsy ampy amin'io hetsi-panoherana amin'izao fotoana izao io dia ny fanohanana, ary azo lazaina fa ny lehibe mpitarika an'ireo mpandray anjara mitaky mafy fiovàna toy ny Hetsika Maitso na “Mouvement Vert” dia nahazo tombontsoa niaraka tamin'i Mir Hossein Moussavi sy Mehdi Karroubi. Tamin'ity indray mitoraka ity, toa manambara fahasorenana eo amin'ny lafiny rehetra ny teny filamatra: ireo mpitaky fiovàna, ireo tony fihetsika ary ireo mpifikitra amin'ny nentindrazana.
Lahatsary voalohany mampiseho ireo mpianatr'i Téhéran mitabataba ary milaza hoe “Ho anareo mpitaky fiovàna ireo, sy ireo mpifikitra amin'ny nentim-paharazana, tapitra hatreo ny dianareo”
Ny zavatra haintsika hatramin'izao : dia misy fihetsiketsehana miseho manerana ny firenena; maro ireo sarin'ny teny filamatra samihafa nataon'ireo mpandray anjara amin'ny hetsika izay manambara ny hadisoam-panantenan'ny vahoaka, tsy amin'ny rafitry ny governemantan'i Repoblikan'i Silamo ihany, fa ny governemantan'i Hassan Rohani ihany koa; toa tsy dia misy resaka tanjona iombonana na mpitarika iray; kanefa toa asehon'ireo mpandray anjara amin'ny hetsika ny tsy fahafaliam-ponyvokatry noho ny tsy fisian'ny asa fivelomana sy ny tsy fisian'ny fivoarana ara-toekarena; fniparitaka erak'ireo media sosialy ireo omba fijery sy fanazavana maro samihafa; misy ny ahiahy ny amin'ny mety ho fahatapahan'ny aterineto; ary nisy Iraniàna maro mpampiasa aterineto no efa nanao tatitra tsy fahafahana miditra aterineto, fahatapahana antso amin'ny finday, ary tsy mandeha intsony ireo tolotra mampiasa VPN.
Tsy mandeha ny OpenVPN
Fa mandeha kosa anefa ny Psiphon
Tapaka ny aterineton'ny finday an'i Hamra Aval nanomboka tamin'ny 9 ora alina ka hatramin'izao ao Karaj
Fa, amin'ny ankapobeny, afaka mifandray amin'ny hafa ny firenena ary misy sarin'ny hetsi-panoherana voaray mifanesisesy matetika avy any amin'ny faritra rehetra manerana ny firenena.
[David Kaye : Des informations laissent entendre que le gouvernement iranien interfère avec l'internet pendant les manifestations actuelles en Iran. rappelons que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné ces disruptions dans sa résolution 32/13 de 2016] ………………….Misy vaovao milaza fa misy hidiran'ny governemanta Iranianina ilay olana aterineto miseho mandritra izao hetsika ao Iran izao. Aleo ampahatsiahivina kely fa nanameloka ireny fanakorontanana ireny ny filankevitra miaro ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana na ONU nandritry ny fanambarana nataony mikasika ny tanjona tratrarina 32/13 tamin'ny taona 2016]
Zavatra niainana manokana: Tsy nanana olana aho ny tontolo andro ary afaka nampiasa aterineto tsara. Misy ny sasany milaza fa nanana olana teo amin'ny fampiasana aterineto nandritry ny adiny 1 na 2 teo, fa niverina tamin'ny laoniny ny rehetra avy eo. Raha ny marina, tsy mbola nahitàna fikorontanana loatra nandritra ireo 3 andro nisian'io fihetsiketsehana io.
Hatramin'izao fotoana izao aloha, ny hany fahatapahan'ny aterineto dia toa izay mikasika ny fidirana amin'ireny sehatry ny media sosialy ngezabe ireny toy ny Telegram sy Instagram. Any Iràna, tombatombanana ho 40 tapitrisa ireo mpampiasa isam-bolana ny vohikala Telegram (ao amin'ny firenena ahitana olona 45 tapitrisa mampiasa aterineto ) ary manodidididina ny 20 tapitrisa eo ireo mampiasa Instagram. Nobitsihan'i Pavel Durov mpamorona io vohikalan'i Telegram io ity hafatra ambany ity mikasika io zava-mitranga io:
Sakanan'ny manampahefana Iraniana ny fidirana amin'ny vohikala Telegram ho an'ny ankamaroan'ny vahoaka Iranianina taorian'ny nandàvanay ampahibemaso ny hanakatonana [fantsona] https://t.co/9E4kXZYcP9 sy ireo fantsona hafa fanehoana fanoerana am-pilaminana
Vaovao voaray tamin'ny ora farany: Nilaza ny fahitalavitry ny Governemanta Iranianina fa atsahatry ny manampahefana mandritry ny fotoana fohy ny fahafahana miditra amin'ny vohikala Instagram sy ilay fampiasa fandefasana hafatra Telegram, mba “hisian'ny filaminana” mandritra ireo hetsika ireo.
Inona avy ireo antony manosika ny olona hanao ireny fihetsiketsehana ireny?
Na efa nilaza ny fomba fijeriny aza ireo manam-pahaizana, dia nisy mpaneho hevitra fanta-daza iray nametraka fanontaniana vitsivitsy. Nilaza ny antom-pisian'io hetsi-panoherana io sy ireo teny filamatra vaovao vitsivitsy niantefa indrindra any amin'ny fanjakàna teo aloha i Sadegh Zibakalam, profesora momba ny siansa politika tao amin'ny anjerimanontolon'i Téhéran, akaiky ireo mpitaky fiovàna. Niely be tao amin'ny Instagram sy Telegram ny lahatsorany:
Marina fa tsy dia namiratra loatra ny governemantan'i Atoa. Rohani teo amin'ny resaka ara-toekarena, fa ny mahatonga ny fahasorenan'ny vahoaka ankehitriny sy ny toe-javatra miseho izay mampatahotra ao Iràna dia tsy vokatry ny politika fitondràn'i Atoa. Rohani fanjakàna tanatin'ny 6-7 volana farany teo, na koa hoe nandritry ny 4 taona farany teo fotsiny….
Ny tetibolan'i Iràna lany tao Siria, sy tao Libanona ary tao Yémen. Izany hoe, tokony ho faly ve ireo vahoaka Iranianina fa lasan'i Hezbollah ao Libanona sy any Yémen ny volany?…
Lasa niova ny anton'ny tsy fahafaliam-pon'ny olona sy ny fahasorenany nanomboka tamin'ny taona 2009. Resaka politika ny hetsika tamin'ny taona 2009, fa izay iainantsika ankehitriny kosa dia resaka ara-toekarena sy tsy misy idiran'ny politika mihitsy. Iza moa no hieritreritra fa ao Iràna, efa 40 taona taorian'ny nisian'ny Repoblika Islamika dia mbola haheno teny filamatra ihany isika manohana ny fitondràm-panjaka iray sy mpanjaka iray, ary hatraminà teny filamatra hitakiana ny fiverenan'ny Mpanjaka sy ireo Pahlavis ?..
Ireo teny filamatra mahavariana izay manohana ny fitondràm-panjaka ireo anefa tsy midika velively hoe ny fangatahana ny fiverenany sy ny fanohanany no tena antom-pisian'ireo fihetsiketsehana ireo; fa karazana teny filamatra anatin'ireo fangatahana isankarazany ihany ireny.
Miparitaka ny fieritreretana fa ireo singa mpandala ny nentim-paharazana ireo no nipoiran'ireo trangan-javatra maro ireo mba hampikorontan-tsaina ny Filoham-pirenena Rohani. Nanao tatitra mikasika an'io fomba fijerin'i Téhéran io ilay mpanao gazety Golnar Motavelli rehefa avy nitety nijery ireo haino aman-jery Iranianina izy:
[6/ Notaterina tao amin'i Tasnim sy Fars io vaovao voaray io, masoivoho roa mpampita vaovao tsy tena ofisialy izy ireo ary tena be mpamaky sy mpanaraka, heverina ho toy ny manana fifandraisana amin'ireo antoko mpanohitra mikatsaka fiovàna ireo ary koa mifamatotra amin'ireo antoko mpandala fatratra ny nentim-paharazana ary tsy mba mivadika amin'ny vondrona sy ny rafitra ara-pinoana nahitàny fiadanana
Manan-danja tokoa izany, satria maneho izany fa mba manana ny fahatsorana sy ny fanohanan'ny antoko mpandala fatratra ny nentim-paharazana ny hetsika karakarain'i Machhad, na eo noho eo izany na tsia, ary indrindra indrindra moa raha eo an-toerana ihany no hitrangan'izany.
Kanefa araka ny hevitr'i Golnar, raha toa ka maneho ny tsy fahafaliam-pon'ny be sy ny maro eo amin'ny sehatra rehetra ny lohahevitr'ireo teny filamatra maro ireo, dia satria mety tsy voafehin'ireo mpandala ny nentim-paharazana ireo, izay nanohana hatrany am-boalohany ny hetsika, ny zava-drehetra.
9/ Nirongatra ny fipoiran'ny teny filamatra mba hampidirana ny resaka rafi-panjakàna amin'ny lafiny rehetra, anisan'izany ny fitantanany. Tamin'izany fotoana izany indrindra no nanomboka nampiseho ny fomba fijeriny ofisialy ny teo amin'ny Fitondràna. Voalohany tamin'izany ny an'i Filoham-pirenena lefitra voalohany dia i Jahangiri, izay nasehony tanatin'ny lahateny nataony tao Téhéran milaza fa tsapany tsara hoe mitaintaina eo amin'ny lafiny ara-toekarena ny vahoaka kanefa]
10/ “Misy zavatra miseho hafa any ambadimbadika any” hoy izy, na iza na iza eritreretiny (ny tiany ambara ampahibemaso dia izay zavatra rehetra mikasika ireo vondrona miziriziry amin'ny heviny), “niverina ary nipetaka teny amin'ny tarehiny ny setroka nalefany”, fomba perisiana hitenenana hoe “nandrora nitsilany izy ireo ka nahavoa tena”